Tsvuku Namata Makenduru
na admin on 20-05-11
Usati wabatidza kenduru yako tsvuku kuti unamate, zvinobatsira kusarudza nzvimbo uye nguva yaunogona kunamata pasina kukanganiswa. Iwe unogona kutarisa minamato yako kuna Mwari, Urieri, uye nedzimwe dzvuku mwenje dzedza pakutsvaga huchenjeri hwaunoda sevhisi. Namata kuti ugone kuwana, kuvandudza, uye ...
Sezvo isu pari kuunza moto kune iyi kenduru wick, ichiita kuti icheneke nemwenje, dai isu tiuyewo nemoto werudo, kune ino nguva yekunyengetera uye yekunamata.may mwenje inoera inotumira marara anotamba, sekubuda kwezuva pamangwanani ane mbiri. uye dai iwo mwenje wechiedza, ungatikomberedza isu nevatinoda. Tinokupa th ...
Ini ndiri kenduru yeapuro diki, inouya kubva kuna Hebei Seawell I / E Co, Ltd. Chando, chakapfeka chitsvuku Santa Claus chipo chine hope uye mufaro wekukwira. Tsvuku uye chena toni, iwo mwenje weKrisimasi inopenya, rega munhu anzwe akasiyana nerudo uye zvinotapira, chiratidzo cherunyararo nemufaro; Gadziriso dzvuku ...
Santa Claus Muti Makenduru
Kumadokero, kungave kwechiKristu, Kisimusi kugadzirira muti weKisimusi, kuti uwedzere mufaro wemamiriro emhemberero. Muti weKisimusi mune yakawanda inogadzirwa, iyo Chinese fir cypress evergreen muti wakadai chiratidzo chehupenyu nekusingaperi. Muti wakashongedzwa nemhando dzese dzemwenje, yakashongedzwa, y ...
Santa Claus Makenduru
Santa Claus akazvitsaurira kuvana vakanaka paKisimusi Evha zvipo zvisinganzwisisike. Ngano manheru ega ega paDecember 24, murume asinganzwisisike aingokwira nagumi nevaviri vaidhonza dhizaini, gonhi nemusuwo kubva pachimney vachipinda mumba, vobva vaisa pachivande chipo chavo pamubhedha wevana vavo ...
Makabarwa emazuva ekuzvarwa
MuGreek yekare, vanhu vanonamata mwarikadzi wemwedzi Artemis. Mhemberero yake yekuzvarwa kwegore rino, Vanhu vanogara vachida kuisa muartari kune uchi hwechingwa uye yakawanda yekugadzira mwenje wakachena mwenje, kuitira kuti varatidze kukoshesa kwavo mwari wemwedzi. Gare gare, nendima yacho ...
Pane imwe nguva, pakanga patenzi vakatamira mumusha mutsva. Tenga mwenje yakawanda nemakenduru. Master funga mwenje unoratidzika, zvisinei, ipapo tenzi mwenje muimba yekutandarira, isa kenduru mukona diki. Chiedza uzvione uchizviita tenzi kurwadziwa kwazvo, saka kukenduru: "kenduru uye kenduru, yo ...
nyuchi dzinovhota makenduru, kenduru tapa kenduru, votive kenduru, kenduru, kenduru yenyuchi, nyuchi mbiru,